प्रचण्डको कडा भाषण, नयाँ ढंगले पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा (पूर्णपाठ) - Everest Dainik - News from Nepal
प्रचण्डको कडा भाषण, नयाँ ढंगले पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, वैशाख २२ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समाजवादी क्रान्तिका लागि सचेत धक्का आवश्यक पर्ने बताएका छन्। मार्क्सवादी विचारक कार्ल मार्क्सको २०० औं जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिका लागि सचेत धक्का जरुरी पर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘पूँजीको विकास हुँदैमा समाजवाद आउँदैन। दलाल नोकशाही पूँजीवाद प्रतिस्थापन नगरी समाजवाद आउँदैन। चीनले हामी अझै समाजवादको प्रारम्भमा छौं भनिरहेको छ। समाजवादका लागि सचेत धक्का चाहिन्छ। हामीले त्यसकै लागि काम गर्नुपर्छ। हामीमा विचार र संगठनमा गति चाहिन्छ, विकास चाहिन्छ, राष्ट्रिय पूँजीको विकास चाहिन्छ।’ कार्यक्रममा प्रचण्डको वैचारिक सम्बोधनको मूख्य अंश सम्पादित रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। यस्तो छ अध्यक्ष
प्रचण्डको सम्बोधनको मूल अंश।
कार्ल मार्क्सकै योगदानका कारण वैज्ञानिक समाजवादको विकास भयो, श्रमजीवीका लागि नयाँ युगको सुत्रपात भयो। विश्वमा ठूलठूला क्रान्ति भए।
हामी कार्ल मार्क्स जन्मिएको २०० वर्ष मनाउँदैछौं। मानव जातिको इतिहासमा कार्ल मार्क्सको निकै ठूलो योगदान रहेको छ। मानव जातिले कार्लमार्क्सलाई १००० वर्षयताकै महान व्यक्ति, महान् दार्शनिक ठान्छ, जसका विचारले संसारलाई नै प्रभावित गर्यो । आजसम्म त्यसको वैज्ञानिक खण्डन कसैले गर्न सकेको छैन। सर्वहारा वर्गले मात्र होइन, उहाँलाई पूँजीवादी शिविर र दुनियाँले मानेको छ।
हिजो पश्चिमको साथी पूर्व जाँदा हार्दिकता हुन्थ्यो। कसिलो हात मिलाइन्थ्यो। हृदयदेखि भावना जागृत हुन्थ्यो। आफ्नोपनको अनुभूति हुन्थ्यो। हामीले जतिसुकै ठूला दुखकष्ट र चुनौति बिर्सन्थ्यौं। तर, अहिले किन त्यस्तो हुँदैन ? हिजो जङ्गलमा सुतियो। तर, जङ्गलको अनुभूति भएन। हामी जङ्गलमा भएजस्तो अनुभूति पनि भएन। तर, अहिले काठमाडौंमा लाखौंको बीचमा हुँदा एक्लै भएको महशुस हुन थालेको छ। अहिले के विचित्र भइराखेको छ ?
मार्क्सवाद कुनै जमेको पोखरीको पानीजस्तो होइन। मार्क्सवादले वैज्ञानिक प्रयोग मान्छ। खुरुखुरु सुत्रले यो हुँदैन, बहस र प्रयोगमा जानुपर्छ। मार्क्सले आफ्नै जीवनमा त्यो प्रयोग गर्नुभएको छ।
कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने र भत्काउने, पार्टी बनाउने र बिघटन गर्ने प्रयोग उहाँले नै गर्नुभयो। तर, हामीकहाँ नयाँ प्रयोग गर्दा अस्थिरको आरोप लाग्छ। हामीले समयअनुसार कदम चाल्नुपर्छ। परिस्थितिअनुसार कदम चाल्ने नेता अस्थिर होइन, गतिशील हो। हामीले पोखरीको पानी भत्काउनुपर्छ। मलाई त्यो पोखरी भत्काएर गड्गडाउने खोलो बनाउन मन लाग्छ।
केही वर्ष त एकले अर्कालाई निषेध गर्न नखोजेको होइन। केही वर्ष शत्रुतापूर्ण सङ्घर्ष पनि भयो। तर, यो वैज्ञानिक सावित भएन। परिस्थितिले दुवै कम्युनिट पार्टी मिल्नु नै राम्रो बनायो। जनताले पनि हामीलाई मिल्न आदेश दिए। हाम्रो बीचमा धेरै अन्तरक्रिया र बहसहरु भए। जनयुद्धकै बेला पनि हाम्रो बीचमा ठूलो बहस सुरु भएको थियो। हामीमा नयाँ परिस्थिति पैदा भयो। हामीले एकताका लागि गहन छलफल र बहस गर्यौं ।
पार्टी एकता ठूलो काम हो, ऐतिहासिक काम हो, असाधारण काम हो। २ अलग बाटोमा हिडेका पार्टी एक ठाउँमा ल्याउनु सामान्य कुरा होइन। मार्क्सवादका शिक्षालाई ठीक ढंगले नबुझी यो सम्भव थिएन। हामीले यो ठूलो प्रयोग ग¥यौं। हामी त्यसमा सफल भयौं। एकताको प्रस्तावकका नाताले ममा गर्व छ, एमाले र माओवादीका रुपमा हामीले चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि गर्यौं, हामीले जित्यौं पनि, हार्यौं पनि। हामी दुवै पार्टीमा जीत र हारको अनुभव भयो। त्यसले एक ठाउँमा आउन बल मिल्यो। हामीमा सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट अगाडि बेढेर संविधान दिने, समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने कुरा सामान्य कुरा होइन।
हामीले संसारभरिका श्रमजीवीलाई नयाँ सन्देश दिन एकता गरिएको हो। पार्टी एकता महान चीज हो। तर, यो आरामसाथ अघि बढ्दैन। पार्टी एकता महान विवाद, महान सङ्घर्षको सुरुवात पनि हो। यो सजिलो कुरा पनि होइन। हामीले नयाँ सङ्कल्प गर्नैपर्छ। त्यसका लागि तयार हुन म सबै कमरेडहरुलाई अपील गर्न चाहन्छु। म फेरि एकपटक सम्पूर्ण त्याग गरेर सङ्घर्षमा होमिन तयार छु। मलाई कुनै कठिनाई छैन। तर, म एक्लै हिँडेर मात्र पनि हुँदैन। त्यसका लागि तपाईहरुको साथ चाहिन्छ। (कार्ल मार्क्सको २०० औं जन्म जयन्तीका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित विचार गोष्ठीमा अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ)